Kororso Aqoontaada Qeebta (3 )
Subject: Kororso Aqoontaada Qeebta (3 ) Sun Sep 12, 2010 2:48 pm
horta qeeebta sadaxaad intaan bilaabin waxaan ugu hambalyeenaa bulsha waynta soomaalida meel walba ay dunida ka joogaan munaasabada ciida
hadaan hori usii galo mawduuceeda oo ah suaalo iyo jawaabo aqoon kororsi qeebta3 ku soo dhawaada
1- su'aal, sheeg asxaabigii bilaabay labada ragacadood ee qofka la dilaayo tukado?
1- jawab, wuxu ahaa qubeyd bin cadi RC
2- su'aal, sheeg asxaabigii ugu horeeyey ee falaar dar allaah u riday?
2- jawab wuxu ahaa sacad bin abii waqaas RC.
3- su'aal, sheeg ninkii ugu horeeyey oo islaam ah oo yeesho ciidan ilaaliyo?
3- jawab, wuxu ahaa mucaawiye binu abii sufyaan RC.
4- su'aal, sheeg qofkii ugu horeeyey ee nabiga (NNKH) salaanta islaamka ku salaama?
4- jawab, waxaa la sheegaa inuu yahay abuu darr al qafaari RC.
5- su'aal, sheeg ninkii ugu horeeyey gaalada laga dilo dagaalkii beder?
5- jawab, wuxu ahaa al aswad bin cabdil azad.
6- su'aal, sheeg ninkii nabiga (NNKH) marada ku ceejiyey?
6- jawab, wuxu ahaa cuqba ibnu abii muceydh.
7- su'aal, sheeg qofkii ugu horeeye ee qiblada u takado?
7- jawab, wuxu ahaa saciid binu mucaali RC.
8- su'aal, sheeg asxaabigii soo islaamiyey tolkiisa (qabiil) oo idil?
8- jawab, wuxu ahaa abuu darr al qafaari RC.
9- su'aal, sheeg yaa ugu soo hor islaamay reer madiina?
9- jawab, waxa ugu soo hor islaamay reer madiina sacad binu suraaqa RC.
10-su'aal, sheeg ninkii ugu warqaadka badnaa reer maka?
10-jawab. wuxu ahaa sumeyn ibnu camar al Juhari.
11-su'aal, sheeg sanadkii uu dhintay abuu darr al qafaari RC?
11-jawab, wuxu dhintay sanadkii 32-aad ee hijriyada.
12-su'aal, sheeg imisa ayey ahaayeen muslimiinta dagaalkii mu'ta?
12-jawab, dagaalkii mu'ta muslimiinta waxay ahaayeen 3000.
13-su'aal, sheeg kal-kaalisadii ugu horeeyey islaamka?
13-jawab, waxay eheed kuceybatu al aslaamiyah.
14-su'aal, sheeg imisa magac ayuu lee yahay qur'aanka?
14-jawab, wuxu lee yahay ilaa 15 magac. waxayna kala yihiin 1- qur'aan, 2-furqaan, 3-tansiil, 4-dikri, 5-kitab, 6-nuur, 7-hudaa, 8-hanuun, 9-raxma, 10-shifaa, 11-mowcida, 12-caziiz, 13-mubaarak, 14-bashiir, 15, nadiir.
15-su'aal, sheeg magacii caalimkii muslinka ahaa ee loo yaqiinay aabihii cilmiga kimistiriga (chemistry)
15-jawab, wuxu ahaa Jaabir Bin Xayaan.....
16-su'aal, sheeg ninkii soomaaliga ahaa ee bad baadiyey diyaarad u socotay Xajka?
16-jawab, sheeg wuxu ahaa c/laahi fiitaan.
17-su'aal, sheeg imisa kiilo meter (KM) ayey isu jiraan washinton iyo new york?
17-jawab, waxay isku jiraan 6000-km,
18-su'aal, sheeg maxaa loo-aqoon jiray caasimada Itoobiya (Ethiopia)?
18-jawab, waxa loo-aqoon jiray fin-finaay.
19-su'aal, sheeg wadamada carabta asal ahaan maxay lacag u isticmaali jireen?
19-jawab. wadamada carabta waxay isticmaali jireen lacagta roomaaniyiinta.
20-su'aal, sheeg diyaaradii jarmalka aheyd ee ay somaliya bad-baadisay sheeg sanadkee ayuu ahaa?
20-jawab. somaliya ayaa bad baadisay diyaarad laga lahaa dalka jarmalka sanadkuna wuxu ahaa 1974.
21-su'aal. sheeg labada wadan ee halka buundo isku xirto?
21- jawab, wadamada ey isku xirto halka buundo waa sacuudiga iyo baxreyn.
22-su'aal, sheeg wadanka caalamka ugu kulul?
22- jawab, wadanka caalamka ugu kulul waa wadanka liibiya (LIBYA)
23- su'aal, sheeg sanadkii ey xurnimada qaadatay dalka baxreyn?
23-jawab, wadanka baxreyn wuxu xurnimada qaatay sanadkii 1977.
24-su'aal, sheeg waxa ugu mac adduunka ?
24-jawab. adduunka waxaa ugu mac dabcan waa candhuufta.
25-su'aal, sheeg shinida imisa indhood ayey leedahay?
25- jawab, shinida waxay leedahay shan (5) indhood.
26-su'aal, sheeg tiyaatarka yaala magaalada moqdisho wadankii dhisay?
26-jawab, tiyaatarka ku yaala magaalada moqdisho waxa dhisay dalka shiinaha (china) waa uu ku faani jiray xiligii somaliya ee somaliya eheed.
27-su'aal, sheeg maskaxda bili'aadanka waa imisa qeybood?
27-jawab, maskaxda bili'aadanka waxa loo qeybiyaa seddex (3) qeybood.
28-su'aal, sheeg isbitaalkii ugu horeeyey ee somaliya ku yaala oo wiish lagu kari jiray?
28-jawab, wuxu ahaa isbitaalka digfeer.
29-su'aal, sheeg garoonka kubada cagta ee stadium moqdisho dalkii dishay?
29-jawab, garoonka kubada cagta ee stadium moqdisho waxa dhisay dalka shiinaha (china)
30-su'aal, sheeg madaxweynihii hore ee dalka ciraaq magaciisa oo seddexan?
30-jawab, madaxweynihii hore ee dalka ciraaq waxa ladhihi jiray sadaam xuseen majiid. waxaana la dilay 30 november 2006 alla yaa raxma aamiin.
Subject: Re: Kororso Aqoontaada Qeebta (3 ) Wed Sep 22, 2010 2:38 am
maa shaa laaah walala waa maduuc zaaid umhiim ah waan kaa sugaynaa qeebaha kale ee mawduucaan mahad sanaid walaal markale
Subject: Re: Kororso Aqoontaada Qeebta (3 ) Wed Sep 29, 2010 4:11 am
walaal waa ku mahadsantahay la soco qeebta 4 goor dhaw
Subject: Re: Kororso Aqoontaada Qeebta (3 )